ယ့ၫၡုၬလ့ၩလၧဆၧလုဂံၪ့. | Radio Veritas Asia
ဘူၭထၪ့လၧၦယုဒၫဖိၪ အဘိၪ့လ့ၩဖၬတၭ ယ့ၫၡုၬလ့ၩထၪ့ဝ့ၫ ထီၩ့လၧယရုစလံၫ့နီၪႇ- ဒၪဘၪဝ့ၫလၧ ၦအၪ့ဆၫချီႇ ဒဲၥိၪႇ ဒဲထိၪလွံႇ ဒဲၦလၧအအၪ့လဲၩစ့ၩ ဆၧၫ့နၩ့ဝ့ၫလၧဆၧလုအဂံၪ့ဖၧၩ့လီၫ.-
တၭအဝ့ၫဒၪ မၩနိၪဖျ့ၪလၧဖျံၩဖိၪတၭႇ နၫ့ထၪ့ခွံၬၦကိၭဂၩဒ့ၭ လၧဆၧလုအဂံၪ့ဖၧၩ့ ဒဲၥိၪႇ ဒဲချီၥံၪလီၫ. တၭလူၫလၩ့ခွံၬ ၦအၪ့လဲၩစ့ၩအစ့ၩနီၪတၭႇ ချႃၬလၩ့ခွံၬစပွဲၥံၪနီၪႇ- စံၭၦလၧ အအၪ့ဆၫထိၪလွံနီၪႇ ဆိၬထၪ့ခွံၬဆၧလဖၪယီၩဘီၪ. ယဖါအဂံၪ့ယီၩ ထီးမၩကဲၪထၪ့လၧ ဆၧအၪ့ခၩအဂံၪ့လဂ့ၩ.-
ထီးနီၪလဖၧၫ့ အထံၩအဖျဲၥံၪ နၪ့ထၪ့ထဲၩ့ဆၧကွ့ၭဝ့ၫလၧအလံၬ စံၭဝ့ၫဒၪႇ ယၥၭဆီၪ့လၧနဂံၪ့အဂးနီၪ အၪ့ခွံၬယူၭယၧၩယူၭ.
မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭႇ ၦယုဒၫဖိၪလဖၪချဲၩ့ဆၧၫ့ဆၧႇ စံၭအဝ့ၫႇ နမၩဆၧလဖၪယီၩတၭႇ မွဲနဒုၭနဲၪပၧၩလၧ ဆၧနီၫလၫအလၩ့လၭလမံၩ့လဲၪ.- ယ့ၫၡုၬချဲၩ့ဆၧၫ့ဝ့ၫတၭႇ စံၭအဝ့ၫၥံၪႇ ရိလၩ့ဎီးခွံၬဆၧလုအဂံၪ့ယီၩတၭႇ ၥၧၫ့နံၩအထးဖၧၩ့နီၪ ယမိမၩထၪ့ထဲၩ့ထီးအဂီၩ့လီၫ.-
ၦယုဒၫဖိၪၥံၪစံၭဒီၭဝ့ၫႇ ဆၧလုအဂံၪ့ယီၩ ၦမၩထၪ့ဝ့ၫလံဆံၫဎူၫနံၪ့ယၫတၭး လၧၥၧၫ့နံၩအထးဖၧၩ့
နီၪႇ မွဲနမၩထၪ့ထဲၩ့နဝ့ၫဘၪမိဂီၩ့ဆ့ဧၪ.- မွဲလါနၫ့ဘိၩ အဝ့ၫဒၪစံၭဆၧလုဂံၪ့ ဘၪဆဲၫ့လၧအမိၡါလီၫ.
မၩအၥၭဘဲၫနီၪတၭႇ ထီးအဂဲထုၪ့မၧၫ့ထၪ့ထဲၩ့ဝ့ၫနီၪႇ အထံၩအဖျဲၥံၪနၪ့ထၪ့ထဲၩ့ လၧအလီၩဘၪဆၧနီၪလီၫ. တၭအဝ့ၫၥံၪ နဲၩဆၧကွ့ၭအၥၭ ဒဲယ့ၫၡုၬအဆၧချဲၩ့နီၪလီၫ.
ထီးအအီၪလၧယရုစလံၫ့အဖၧၩ့ႇ လၧဘိၪ့လ့ၩဖၬအဘိၩ့ဘၭနီၪႇ ၦၡၩဒၪဘၪဆၧလၩ့လၭ လၧအမၩဝ့ၫတၭႇ ၦအၪဂၩနဲၩထဲၩ့အမံၩ့လီၫ.- မွဲလါနၫ့ဘဲၫနီၪတၭႇ ယ့ၫၡုၬဒိၭနဲၩ့အၥၭ လၧအဝ့ၫၥံၪအစူၪဖၧၩ့အ့ၬ. မွဲအၥ့ၪယၫၦကိၭဂၩဒ့ၭအဂဲးလီၫ.- ၦထိးအၥၭလၧ ၦၡၩအဂဲးအကၠီၪ့နီၪႇ အလးအီၪအ့ၬး အဂဲးဘဲၫယီၩ ဆၧအီၪလၧၦၡၩအဖၧၩ့နီၪ အဝ့ၫဒၪၥ့ၪယၫဝ့ၫဒၪလီၫ.